Maxey Tahay waxa uu ku fikirayo tababare Klopp, kaddib marka uu dhamaado heshiiskiisa Liverpool?? – Gool FM
(Yurub) 21 Agoosto 2019. Macalinka reer Germany iyo kooxda kubadda cagta Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa si maldahan u sheegay in gabi ahaanba uu ka fariisan karo shaqada tababarka, kaddib marka uu dhamaado heshiiska uu ku joogo Reds.
Heshiiska uu Jürgen Klopp ku joogo garoonka Anfield ayaa lala xiriirinayaa inuu gaarsiisan yahay ilaa iyo 2022-ka, kaddib shaqadii fiicneyd uu ka soo qabtay Liverpool sanadihii ugu dambeeyay.
Klopp ayaa ku hogaamiyay Liverpool inay ku guuleysato koobka Champions League xili ciyaareedkii hore, wuxuuna kula tartamay Manchester City ilaa iyo kulankii ugu dambeeyay hanashada horyaalka Premier League, laakiin farqi hal dhibac oo kaliya ayey ugu dambeyntii Skay Blues kaga guuleysatay horyaalka.
Yeelkadeeda, Klopp ayaa u safray dalka Jarmalka horaantii isbuucaan si uu u gudoomo abaal-marin sharafeed ah macalinka ugu fiicnaa sanadka dalka Germany, abaal-marinta kaddib ayuu sheegay macalinka reer Germany:
“Waxaan rajeynayaa inaan sidan ku sii socdo, laakiin labo ama seddex sano kaddib, ma aqaano waxa dhici kara”.
Intaas kaddib Klopp ayaa si qosol ah u sheegay:
“Waxaa laga yaabaa inaan ciyaaraha ka fariisto, taa micnaheedu maahan inay dhacdo, laakiin haddii ay sidaas noqoto, lama yaabin doontid!”.